Free Visa Courtiers for Myanmar Citizen. Part 1 – YANGON STYLE
Free Visa Courtiers for Myanmar Citizen. Part 1
မြန်မာနိုင်ငံမှ Visa မလိုဘဲ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မည့် (၁၄) နိုင်ငံ များအကြောင်း (၁)
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီဇာမလိုအပ်ဘဲသွားလာနိုင်သော နိုင်ငံအများစုသည် အရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးရာ အရပ်ဒေသများ၊ သဘာဝ သံယံဇာတ အလှအပများပေါင်းစုရာ နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့်ကမ္ဘာရှေးအကျဆုံး ယဉ်ကျေးမှုများကို ထိန်သိမ်ထားသောနေရာများ၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေသောနိုင်ငံစုစုပေါင်း (၁၄)နိုင်ငံ တိတိကို လွယ်ကူစွာ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
၁. Brunei (14days)
၂. Cambodia (14days)
၄. Ecuador (21days)
၆. Haiti (90days)
၇. Indonesia (30days)
၈. Laos (14days)
၉. Micronesia (30days)
၁၁.Saint Vincent and the Grenadines (1 month)
၁၃Thailand (14days, by air only)
“နေဂါရာ ဘရုနိုင်း ဒါရုစလမ်နိုင်ငံ” သည် ဘုရင်အုပ်ချုပ်သော အစ္စလာမ်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့တော်မှာ ဘန်ဒါဆရီင်္ဘီဂါဝန်မြို့ဖြစ်ပြီး ရေနံကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်သဖြင့် ဆီဈေးချိုသာသဖြင့် ကားပိုင်ဆိုင်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကနေ Visa မလိုဘဲသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီး နေထိုင်ခွင့်(၁၄)ရက် ပေးထားပါသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံ ဘရုနိုင်းကို ရန်ကုန်မြို့ကနေ တိုင်းတာပါက ၂၄၄၀.၅၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင် ရှိပါသည်။
“ကမ္ဘောဒီးယား ဘုရင့်နိုင်ငံ” သည် ခမာလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းအစဉ်အလာ အခိုင်အမာဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များစွာ ထွန်းကားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ အန်ကောဝတ်ဘုရာကျောင်းသည် ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ထည်ဝါခမ်းနားစွာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တည်ရှိနေပါသည်။ မြို့တော်မှာ ဖနွမ်းပင်ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အဓိက ကိုးကွယ်သော အာဆီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည် (၁၄)ရက်တာထိ Visa မလိုဘဲ ကမ္ဘောဒီးယား သို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီး ရန်ကုန်မှ ၁၀၅၆.၂၃ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပါသည်။
“ ဒိုမီနီကာ ဓနသဟာယနိုင်ငံ” သည် ကရစ်ဘီယံပယ်လယ် အတွင်းရှိ ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာဒုတိယ အကြီးဆုံး ရေပူကန်ကြီးရှိပါသည်။ ဘူမိဗေဒသဘောတရားအရ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ၁၄၉၃ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့ တွင် ကိုလံဘတ်က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တွေ့ရှိခဲ့သောနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကို အစွဲပြုပြီး လက်တင်ဘာသာစကားအရ ဒိုမီနီကာ ဟုအမည်တွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နှင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကစီးပွားရေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော ခရစ်ယာန်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် Visa မလိုအပ်ဘဲ ရက်ပေါင်း ၂၁ရက် နေထိုင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ဒိုမီနီကာ သည် ရန်ကုန်မှ ၁၅၆၈၆.၃၉ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးပါသည်။
“ အီကွေဒေါ သမ္မတနိုင်ငံ” သည် အီကွေတာမျဉ်းဖြတ်သွားသော နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် စပိန်တို့မှ အီကွေဒေါဟု အမည်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ ကီတို မြို့ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်အသုံးပြုကျသော်လည်း ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ စပိန်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် Visa မလိုအပ်ဘဲ ရက်ပေါင်း ၉၀အထိ နေထိုင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ရန်ကုန်မှ ၁၆၂၅၆.၅၃ ကီလိုမီတာ အကွာတွင်တည်ရှိသည်။
“ ဂမ်ဘီးယား သမ္မတနိင်ငံ” သည် အဖရိကတိုက် အနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး အာဖရိကတိုက် ကုန်းမကြီးပေါ်တွင် အသေးဆုံးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရုံးသုံးဘာစာစကားအဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာကိုသာ အသုံပြုသော အစ္စလာမ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဘန်ဂျူးလ်မြို့မှာ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်နှင့် ၁၁၇၈၆.၄၂ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည်။
“ ဟေတီ သမ္မတနိင်ငံ” သည် အနောက် အိန္ဒိယကျွန်စုတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော ဟစ္စပါညိုလာကျွန်း အနောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ဟေတီ ဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်သားဘာသာစကားဖြင့် ကုန်းမြင့်ဟုခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရောမန်ကတ်သလစ်အယူဝါဒကို အဓိက ကိုးကွယ်ကျသည်။ ပြင်သစ်ကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ ပြင်သစ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် Visa မလိုအပ်ဘဲ ရက်ပေါင်း ၉၀အထိ နေထိုင်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ဟေတီနိုင်ငံသည် ၁၅၈၅၄.၅၉ကီလိုမီတာခန့် ရန်ကုန်မှကွာဝေးသည်။